Onye na -emepụta eriri igwe na ụlọ nrụpụta kacha mma | CSJ
N'ime sistemụ MRI, eriri nnata bụ ihe dị mkpa, nke na -emetụta ogo onyonyo ozugbo. Anata coils bụ ọrụ maka ịchọpụta akara MR. Igwe ikuku nke na -ewepụta ọkụ eletrik nwere ike weghara ikuku ndọta magnetik na -agbagharị agbagharị. Mgbe ahụ, a na -abawanye ike ugbu a, digitized, na nzacha iji wepụta ozi ugboro na oge.
Igwe mkpuchi elu, eriri olu, ihe mkpuchi transceiver
ahaziri dị ka ndị ahịa si kwuo
otu ọwa, ọwa abụọ, ọwa anọ, ọwa 8, ọwa 16, wdg.
dị mma karịa 20dB
1MHz, nye ahaziri ya
Mgbe ọtụtụ afọ nyocha na ịrụsi ọrụ ike na -enweghị nkwụsị, ndị otu R&D nke ụlọ ọrụ anyị ewepụtala igwe nnata nke ya site na ule na ntụnyere ugboro ugboro, ihe ngosi arụmọrụ ya erutela ọkwa ụlọ ọrụ.
Anyị nwere ọtụtụ ụdị ịnata coils ịhọrọ site na ya, nke enwere ike ịkewa ya dịka ọdịdị ya si dị, nke nwere ike kewaa n'ime elu, nnụnụ, na coils transceiver. Na mgbakwunye, onye ọrụ nwere ike họrọ ọnụọgụ ọwa nke eriri igwe dịka achọrọ,
N'ozuzu, mkpuchi mkpuchi nnụnụ bụ nke a na -ejikarị, enwere ike iji ya n'isi, olu, ikpere, wdg; dịka ọmụmaatụ, eriri mkpuchi nnụnụ nwere ọwa abụọ nwere mkpuchi mkpuchi na mkpuchi akwa. Ihe mkpuchi anyị nwere ihe dị elu na ịdị n'otu dị mma, nwere ike izute mkpa nyocha dị iche iche, n'otu oge ahụ, anyị na -enyekwa ọrụ ahaziri iche, ndị ọrụ nwere ike họrọ nha n'onwe ha.
Enwere ike iji eriri elu ahụ wee nyochaa iberibe azụ ma ọ bụ akụkụ ndị ọzọ nwere mmasị; mgbe ị na -eji eriri elu, n'ihi oghere ya, ị nwere ike inyocha mpaghara mmasị na ọkwa dị iche iche.
Ihe mkpuchi transceiver bụ ụdị mkpuchi ọhụrụ. A na -ejikọ ya na nnyefe ya, yabụ nha nke eriri igwe dị obere karịa eriri igwe nkịtị. N'okpuru otu ọnọdụ ahụ, ma e jiri ya tụnyere sistemụ mgbasa ozi ọdịnala ọdịnala, ọ nwere obere ihe achọrọ na ike nke ampilifaya RF. Na mgbakwunye, n'ihi obere nha ya, ọ chọghị nha oghere ndọta buru ibu, enwere ike iji ya maka obere sistemụ ma ọ bụ sistemụ ndị ọzọ nwere oghere chọrọ.
1, Ụdị: eriri igwe, olu olu, eriri igwe na-ebunye ihe
2, Frequency: ahaziri dị ka ndị ahịa
3, Ọwa: otu ọwa, ọwa abụọ, ọwa anọ, ọwa 8, ọwa 16, wdg.
4, impedance ntinye: 50 ohms
5 、Nwepu: ka mma karịa 20dB
6, Nweta nkwalite nkwalite: 30dB
Onyonyo mkpọtụ: 0.5-0.7
8, bandwit na -arụ ọrụ: 1MHz,
Nke gara aga: Bathlọ ọkụ na -acha uhie uhie Flamingo
Osote: MRI Interventional Coil
Gradient Coil maka MRI